Masimba masimba anokanganisa sei vaviri ava | Bezzia
Maratidziro emasimba anobata sei vaviri ava
Maria Jose Roldan | 08/06/2021 22:00 | Hukama
Simba rinowanzo kuve chimwe chezvikonzero zvekupokana kana kurwa mune vakawanda vakaroorana. Masimba masimba anogara aripo uye akajairwa, chimwe chinhu chisingabatsire vaviri vacho pachavo. Nyaya yacho inotonyanya kuwedzerwa apo bato rinowana simba rinorishandisa kuzvibatsira uye risingarishandisi kugadzirisa hukama neumwe mubato.
Munyaya inotevera tichazotaura nezvekurwira masimba mune vaviri uye zvinogona kukuvadza sei kuhukama.
1 Kurwira simba mune vaviri
2 Matambudziko nekuda kwesimba remasimba mune vaviri vacho
Kurwira simba mune vaviri
Kugovera simba mukati mevaviri harisi basa riri nyore kana nyore. Iwe unofanirwa kufunga nezve izvo zvinodiwa nevanhu vese uye kana izvi zvikasaitika, zvingangoita kuti zvinhu zvinopera zvakashata. Chinhu chakajairika ndechekuti nekufamba kwenguva, simba rambotaurwa rinoenzaniswa uye munhu wega wega anorishandisa nenzira kwayo pane dzimwe nguva.
Izvo hazvigone kuti mukati mehumwe hukama, munhu mumwe chete ndiye ane simba iro uye mumwe wacho anongo ganhurira pakubvuma zvisarudzo zvemumwe. Nekufamba kwenguva, kutonga kwakadai kunogona kukonzera kukuvadza kwakanyanya kune mumwe wako uye kukonzera hukama kuve husina kusimba zvine ngozi.
Matambudziko nekuda kwesimba remasimba mune vaviri vacho
Kurwira kwemasimba kunoitika kazhinji mukati mevaviri, zvinogona kukonzeresa zviuru zvematambudziko:
Zvinogona kuitika kuti kurwira masimba kuri kukonzerwa nenyaya yekuti vanhu vaviri vanoda kutora chinzvimbo chakakosha. Vese vanhu vanoda kuve vakarurama nguva dzese, zvichikonzera kukakavara nekurwa panguva dzese dzezuva. Hapana kana mumwe wavo anopa ruoko rwake kumonyorora uye izvi zvinoita kuti kugara pamwe chete kuve kwakaomarara uye kwakaoma. Mune zviitiko izvi, zvakakosha kunzwira tsitsi nemumwe wako zvakanyanya sezvazvinogona uye kuzviisa mushangu dzeumwe.
Nenzira imwecheteyo, kunetsana kwakasiyana kunogona kumuka mune chiitiko chekuti hapana mukati mevaviri, vanoda kutora simba nekutonga. Kushaikwa kwekuchengetedzeka kune vaviri vacho kunopfuura kuoneka uye izvi zvinopedzisira zvakuvadza hukama hwacho pachahwo. Mune ino kesi, zvakakosha kufumura akasiyana maonero uye kubva ipapo tora danho pamwe chete.
Muchidimbu, kurwira kwemasimba mukati mevaviri kunogona kutorwa sechinhu chakajairwa uye hakufanirwe kuve nechakaipa, chero bedzi kutonga kwakadaro uye simba risingakonzere kukuvadza kune chimwe chikamu chevaviri. Panofanirwa kuve neyakaenzana musimba iro munhu mumwe nemumwe anaro mukati mehukama. Izvo zvisina kunaka kune vaviri vacho ndezvekuti kugoverwa kwesimba ndicho chikonzero chekupokana kunopesana kwemarudzi ese.
Kana izvi zvikaitika, zvingave zvakakosha kugara pasi mutaure nenzira yakadzikama uye nekumisikidza zvibvumirano zvakateedzana maererano nekuti ndiyani ane simba mukati mevaviri ava. Zvakanakisa, simba rinoshandura maoko zvinoenderana nesarudzo dzakasiyana dzinofanirwa kuitwa mukati mehukama. Zvikasadaro, mamiriro acho anogona kuve asingachinjiki nezvose zvakaipa izvo izvo zvinosanganisira kune vaviri vacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Maratidziro emasimba anobata sei vaviri ava
Maitiro ekudzivirira hutachiona kuboora kweguvhu